Akhriso: Madaxweyne ha noqon siyaad kii labaad - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Akhriso: Madaxweyne ha noqon siyaad kii labaad
July 1, 2019 8:47 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
M,maxamed cabdilahi farmaajo oo xalay khudbad ka jeedinaya xafladii xornimada somalia ee 1july ayaa yidhi: somaliland waxaan kula talinayaa inay ku daydaaan awoowyaashoodii midnimada keenyay !
Run ahaantii hadalka aad ban ula yaabay, ma wuxuu doonayaa in ay reer somaliland mar labaad soo yaacaan oo ay dhahaan midno ayaan doonayna !
Waa kuma qofka hada laga rabo in uu midnimo raadiyo? Waa kuma qofka hada la rabo in uu maslaxaad iyo tanaasul la yimaado oo uu quluubta umadahan kala hirdoobey isu soo dhaweeyo? Waa kuma qofka ay waajibka ku tahay ee u dhaartay in uu somali wanaageeda iyo minimadeeda ka shaqeeyo?
Halkaa markay arintu taagantahay aniga waxaa isoo baxday in xukuumada nabad iyo nolol ayna marnaba qorshaha ugu jirin in ay somaliland wada hadal la furaan, balse ay doonayaan inay caalamka kasoo xidhxidhaan oo ay go’doomiyaan dabadeeto ay khasab ku keenaan ! Taasina ma aha mid dhacaysa.
Cadaadiska somaliland ay ku Hayaan khayre iyo farmaajo maaha mid qarsoon, waa mid cad oo aan daah saarnayn, waana sababta sii kala fogaynaysa shucuubta ee dareenka iyo naxliga galinaysa !
●Waxaynu ognahay dawlada somalia inay hawadii lasoo wareegtay iyadoon somaliland ka wargalin kalana tashan.
●Waxaynu ognahay xujaajtii somaliland culayska ay xukuumada nabad iyo nol saartay.
●Waxaynu ognahay dagaalka ay xukuumada somalia u gashay inaan la dhoofin xoolaha somaliland.
●Waxaynu ognahay qoraalkii wasraada arimaha debada kenya ay soo dhigtay barteeda Twitterka sida ay uga falcelisay.
●Waxaynu ognahay wada-hadaladii uga furmi lahaa somalia iyo Somaliland Nairobi in ay diiday oo ay u goysay oo ay somaliland ku kali-yaysatay.
Iyo waxyaalo badan oo kale.
Markaa iswaydii yaa somali kala dilaya ee kala fogaynaya, oo midnimada la dagaalamaya ma somaliland mise somalia madaxdeeda.
Hal mid ayay reer somaliland ayana madaxwayne farmaajo Kula talinayaan;
HA NOQON SIYAADKII 2AAD.
QALINKII cabdirisaaq dallo